Xa i-Instagram ikubhatala ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Xa i-Instagram ikuhlawula
Agasti 4, 2019 0 IiCententarios 1259
Siphila kwixesha apho izixhobo zedijithali, iimpembelelo kunye namashishini akwe-intanethi athatha ukuqaqamba mihla le. Yiyo loo nto abaninzi bebuza xa i-Instagram ikuhlawula; kwaye kukuba yenye yezona uthungelwano zikhulu ehlabathini kunengqondo ukuba inani elikhulu labantu lizinikele ekusebenzeni kulo.
Okwangoku, Instagram Iye yaba lolona lwalamano lubalaseleyo kumashishini akwi-Intanethi nakumashishini. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi loo nto xa i-Instagram ikuhlawula Ayikwenzi ngokuthe ngqo. Injani intlawulo? Kulula, kuya kufuneka utsalane ingqalelo yeenkampani ezinomdla wentengiso yeemveliso zakho. Oku kuyenzeka ukuba uneakhawunti ye-Instagram aziwa ngokwaneleyo kwaye inempembelelo.
I-Instagram ikuhlawula nini: Fumana apha!
Ngaba unomdla wokufunda xa i-Instagram ikuhlawula? Unenqaku elibonisiweyo, siza kukubonisa apha! Nangona i-Instagram yinethiwekhi yentlalo kuphela ukulungiselela ukuphathwa kweefoto kunye nevidiyo; Okwangoku, ikwasetyenziselwa ukuphatha inani elikhulu lentengiso, kunye nentengiso yedijithali. Nangona kunjalo, xa i-Instagram ikuhlawula Ayikwenzi oko ngenxa yempembelelo yakho enkulu, incinci ngenxa yomxholo oyifakileyo, kodwa ezinye izinto zithathelwa ingqalelo.
Kuqhelekile ukuva oko xa i-Instagram ikuhlawula Iyenza ngenani labalandeli, kodwa akukho nto iphosakeleyo kunoko. Nangona inani labalandeli onalo likunceda, akwanele ukufumana intlawulo kwi-Instagram. Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba i-Instagram ayikuhlawuli, ufumana imali kwinethiwekhi yoluntu. Injani lento? Ngempembelelo yakho, kunye nomxholo womgangatho owenzayo, ukutsala umdla weempawu okanye iinkampani.
Ke, xa uphawu lunomdla wokukhuthaza iimveliso zalo, unokufumana imali. Yiyo loo nto xa i-Instagram ikuhlawula Ayikwenzi ngokuthe ngqo, kodwa kunokuba ngokungangqalanga ngokuhlukahlukana kweenkampani kunye neebhloko zenza ubomi eqongeni.
Fumana imali nge-Instagram!
Ufuna ukufunda ukwenza imali kwiakhawunti yakho ye-Instagram? Nika ingqalelo! Yonke imihla kunabantu abaninzi abagqiba kwelokuba ukubheja ngokuzinikela kwihlabathi ledijithali; I-Instagram ibe yenye yeendlela ezilungileyo zokuyiphumeza. Kungenxa yoko abantu abaninzi bejonga ingqalelo yabo xa i-Instagram ikuhlawula.
Nangona kunjalo, ukugxila kwakho kufuneka ngakumbi kukufumana ezona ndlela zokwenza imali kwiakhawunti yakho ye-Instagram. Ngale ndlela, unokufumana ukwahluka kwezibonelelo, phakathi kwayo oya kubona xa i-Instagram ikuhlawula, abalandeli, ukuthandwa okukhulu, ifuthe kwinethiwekhi yentlalo, phakathi kwabanye.
Lo msebenzi namhlanje uphakathi kwezona zinto zintsha, ekubeni i-Instagram iyinethiwekhi yokufota, akukho mntu ucinga ukuba iya kuba sisixhobo sokufumana imali, nangakumbi, ukuqala amashishini amatsha. Nangona kunjalo, sele sibonile ukuba okwangoku iqonga liqhubeka ngokuvela, kunika abo babizwa ngokuba ngabaphembeleli okanye i-instagramers, abafumana izibonelelo ezibonakalayo zoqoqosho ngenxa yale nethiwekhi yoluntu.
Kwaye, yonke imihla kunabantu abaninzi abagqiba kwelokuba ukubheja kwimali engenayo nge-Instagram, bamkele ezi ndlela zintsha; Nangona, ayisiyiyo yonke into elula njengokutsho. Kungenxa yoko, kuya kufuneka usebenze nzima ukuze ifuthe lakho kwi-Instagram lihlale lisanda, usebenzisa iindlela ezahlukeneyo esiya kuthi sizinike zona kamva.
Yintoni inzuzo oyifumanayo?
Ngaphambili, inyathelo elikhulu lokufumana ifuthe kwimarike, kunye nesona sicwangciso sokufumana ukuthandwa yayikumashishini weTV; Nangona kunjalo, akusekho njalo. Okwangoku, ii-brand kunye neenkampani ezibalulekileyo, kunye ne-betting ukubheja ukutsala uluntu ngokusebenzisa iinethiwekhi zentlalo, ukuba yi-Instagram enye yezona zidumileyo.
Yiloo nto ke, kuvela umkhwa omtsha okanye intshukumo ebizwa ngokuba ngabafakisi. Abantu abasebenzisa ukuthandwa kwabo kuthungelwano lwentlalo ukufumana imali, ukuba yinto yokuqala ekugxilwe kuyo ye-brand kunye namashishini anomdla wokukhuthaza iimveliso zabo. Ngelixa alikho inani elichanekileyo labalandeli abakulungeleyo, kuyacetyiswa ukuba unenani elikhulu.
Umvuzo womntu ochukumisayo
Kwihlabathi ledijithali unokufumana iimpembelelo kuwo onke amacandelo. Ngoku, ezo zibalulekileyo kuhambo, ubuhle, ifashoni, phakathi kwabanye, zihlala zimi ngaphandle. Amaxabiso ezi nkonzo asilwazi loluntu. Nangona kunjalo, ufumana iinkampani ezijongana nokuhlawula, phakathi kwazo kukho iiarhente ze-Intanethi okanye amashishini.
Ngoku, amashishini kunye nokungenela okwangoku bakhetha izivumelwano ezithile ezingakumbi okanye ezisisigxina. Ngaphandle kweearhente, iinkampani ezininzi zikhetha izivumelwano ezibandakanya ushicilelo olunye okanye umfanekiso. Kwelinye icala, ukubonakala kwezinto ezibonakalayo ezinento yokwenza nemikhankaso okanye kwezinye iimeko izivumelwano ezizodwa ziya kusoloko zihlala zihleli.
Njengoko besitshilo, umvuzo we-influencer awukho kwindawo kawonke wonke. Nangona kunjalo, kukho imithombo emininzi enika ukusondela. Ukufumana emva koko, imivuzo esukela kwi-80-100 euros kupapasho ngalunye, ukufikelela kumanani e-2.500 euros, konke kuxhomekeke kwinani labalandeli onabo.
Kubalulekile ukucacisa ukuba, xa i-Instagram ikuhlawula Ngokwale mvumelwano ifunyenwe kwindawo yakho, umvuzo wakho awuyi kuhlala uyimali. Kwiimeko ezininzi, ii-brand khetha ukuthumela iimveliso kubaphembeleli, ukuze bakwazi ukuzama ukubacebisa kupapasho lwabo.
Uyenza njani imali nge-Instagram?
Ngokungafaniyo namanye amaqonga edijithali afana neYouTube, xa i-Instagram ikuhlawula Ayikwenzi oko ngenxa yomxholo okanye ubungakanani botyelelo oluqhubayo. Ngokuchasene noko, intlawulo kule yenethiwekhi yoluntu ifunyanwa ngezivumelwano neenkampani ezikunika izivumelwano zokukhuthaza kunye nokubhengeza iimveliso kunye neenkonzo zabo.
Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuqaqambisa ukuba ayisiyiyo i-Instagram ekuhlawulayo kodwa ziimpawu kunye neenkampani ezikhoyo kwinethiwekhi yoluntu. Isitshixo sempumelelo yokuqhekeza njengempembelelo kwi-Instagram kukuba ube noluntu olulungileyo lwabalandeli. Ngokusekwe koku, ii-brand ezininzi ziya kukujonga, ukuze ukwazi ukukhuthaza kunye nokubhengeza iimveliso zakho.
Unokuba nomdla: Iiakhawunti ezinabalandeli abaninzi kwi-Instagram
Inkqubo iyahluka kuxhomekeka kubani owenza unxibelelwano. Ngamaxesha amaninzi, ngumbhambisi onxibelelana nenkampani exhasayo, okanye kwelinye icala imeko apho umthengisi ngulowo uqesha iinkonzo zomnxibelelanisi. Ngayiphi na imeko, sicebisa ukuba ujike kwimakethi yabaphembeleli ukuze ukhethe ezona zinikezelwayo zibalaseleyo.
Ngendlela efanayo, kukho neenethiwekhi zokuthengisa ezikuthumela ulwazi malunga nokunikezelwa kurhwebo. Kukubuza nganto idatha ethe kratya kunye nesirekhodi, kunye nokunxibelelanisa iinethiwekhi zakho zentlalo.
Ngoku, ngelixa ulawula le nkqubo yonke kwaye ujonge ezona zinto zithengiswayo; Sicebisa ukuba uqhubeke nokusebenza ekukhuleni kwinethiwekhi yakho, kwaye uphucule nomgangatho womxholo opapashayo. Ngale ndlela, iprofayile yakho iya kuba nomtsalane ngakumbi kwiinkampani ezijonge abagqugqisi.
Kuphephe kuzo zonke iindleko, ukuthengwa kwabalandeli kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zangaphandle ukukhulisa uluntu lwakho. Yintoni onokuyenza ngokusebenzisa ezi ndlela kukuba i-Instagram ikuvimba. Khulisa uluntu lwakho kancinci kancinci kwaye uya kuyibona indlela ukukhula kwakho okuya kuba nomtsalane kwiimpawu ezahlukeneyo kunye nemikhankaso yentengiso enqwenela ukukuqesha ukuba ukhuthaze iimveliso zabo.
Iindlela zokufumana imali nge-Instagram
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuchaza ukuba luhlobo luni lwezihloko ofuna ukuzisingatha. Oku kuya kuxhomekeka kumxholo ophetheyo, kunye nodidi lwabakhangisi abanomdla ekuhlaleni. Nje ukuba loo ngcaciso ichaziwe, kuya kufuneka usebenze ekuveliseni owona mgangatho uphambili unokuwupapasha.
Ukucacisa ezona ngongoma zibalulekileyo, siya kuchaza ezinye iindlela eziza kuluncedo kakhulu ukufumana imali kwi-Instagram. Sicebisa ukuba uzisebenzise kwaye usebenze kuzo rhoqo, kwaye ke uya kubona ukukhula okusebenzayo kuluntu lwakho.
Nikeza kwaye uthengise iifoto zakho
Nangona kunjalo, ubuninzi bezibonelelo ezenziwe kwi-Instagram zixhomekeke kwinani labalandeli kunye nefuthe elikhulu onalo; Kukho ezinye iindlela onokuthi usebenzise amathuba. Ukuba ungumfoti okanye, uthwebula imifanekiso enomdla kunye nenhle esemgangathweni; Namhlanje kukho iibhanki ezininzi zemifanekiso ngaphezulu kokuvuma ukukuhlawula ngokomxholo wakho. Abona babalaseleyo kubo yiShutterstock, ehlawula imifanekiso, kunye neeksera neevidiyo.
Iimpawu zoqhakamshelwano kunye nabathengisi
Kuxhomekeke kumxholo owuphetheyo, unokufumana kwaye unxibelelane nabathengisi abakulungeleyo. Ke, kuxhomekeke kwinqanaba lokufikelela kwiakhawunti yakho, iimveliso zinokubonelela ngeentsebenzo ezilungileyo kakhulu. Nangona kunjalo, akukho sixa simiselweyo sokwazi ukuba iakhawunti yakho inefuthe, kuhlala kucetyiswa ukuba ufikelele kubalandeli abayi-1000 kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
Thengisa iakhawunti yakho ye-Instagram
Enye yezinto ezinomdla kubantu abatyala imali kwi-Instagram ziiakhawunti ezinamawakawaka amawaka abalandeli. Ukuba le yimeko yakho, kwaye akusafuni ukusebenzisa iakhawunti yakho ye-Instagram, sincoma ukuba ujonge owokugqibela kwaye uthengise kuwe. Ke, umniniwo omtsha uya kukunika into entsha oyisebenzisayo yokufumana ithuba labalandeli kunye nefuthe olifumeneyo.
1 I-Instagram ikuhlawula nini: Fumana apha!
1.1 Fumana imali nge-Instagram!
2 Yintoni inzuzo oyifumanayo?
2.1 Umvuzo womntu ochukumisayo
3 Uyenza njani imali nge-Instagram?
4 Iindlela zokufumana imali nge-Instagram
4.1 Nikeza kwaye uthengise iifoto zakho
4.2 Iimpawu zoqhakamshelwano kunye nabathengisi
4.3 Thengisa iakhawunti yakho ye-Instagram
Agasti 4, 2019
Xa i-Instagram ilumkisa ukuba uthatha skrini
Xa i-Instagram iqinisekisa i-akhawunti